Turkey kalsoonida maal-caalamiga ah ee Bursa Full | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaTurkey aaminaad buuxda ee maalgashadayaasha caalamiga ah ee Bursa
04 / 04 / 2017 16 Bursa, GUUD, TURKEY
Turkey kalsoonida maal-caalamiga ah ee Bursa Full: Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BCCI), shirkadaha caalamiga ah la maalgelinta Bursa madaxda sare leh ka qaybgalka qunsulka sharafeedka magaalada, 'ee Indhaha Dibadda Bursa iyo Turkey Economy' ayaa waxaa lagu qabtay shirka. Isagoo ka hadlayay kulanka, ka qaybgalayaasha, halka magaalada iyo muujiyeen kalsoonida mustaqbalka dalka, Madaxweyne ku-xigeenka BCCI Cuneyt Sen sidoo kale "helay mar walba maal-kalsooni Turkiga," ayuu yiri.
BTSO, dallada urur ee ganacsiga adduunka Bursa, wuxuu sii wadaa inuu qaado tillaabooyin muhiim ah si uu ugu biiro dhaqaalaha. ee qunsiliyadda sharafeedka wakiilada shirkada maalgashi caalami ah oo ku yaalla Bursa ee maalgashadayaasha shisheeye ka leexinayn ee kulanka, kaas oo isku keenay pickings Bursa iyo Turkey ayaa laga wada hadlay. Cüneyt Şener, gudoomiye kuxigeenka gudiga agaasinka ee BTSO, wuxuu cadeeyay in Bursa ay marti galineyso maalgashiyo muhiim ah gaar ahaan kuwa gawaarida, mashiinada iyo warshadaha dharka, kuwaas oo qeyb libaax leh ka qaata dhaqaalaha dalka, wuxuu yiri: Bursa waxay heshay qaab dhismeedkeeda adag maanta. Sidii aan u dhisi lahayn guulaha Bursa illaa iyo hadda, waxaan ku gaari doonnaa yoolalkayaga xigga garabka-ilaa-garab.
"WAA INA AAN KU RAACSANAYSAA FARSAMADA"
Madaxweyne ku-xigeenka Cuneyt Sener, 'Haddii sixir Bursa Turkey Magic ayaa aaminsan in xoojinta gacmaha maal ka baxsan, laakiin sidoo kale hoosta ka xariiqay in ay ka filayaan dadkii oo dhan iyo taageerada hay'adaha isagoo leh xoog u ololeynta caalami ah si ay u sameeyaan ciidan ee maal-cusub. Sener, dhaqaale xoogan ka dib markii afti bishii April 16, oo awood badan Turkey ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin inay soo xerogelin doonaan qaab kordhinta kobaca la dhiga ah. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in BTSO ay fulineyso mashaariic muhiim ah si loo xoojiyo gacanta shirkadaha ku sugan Bursa laguna dhiiri geliyo maalgashiyo cusub, ayuu yiri Şener, TEKN TEKNOSAB waa mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan dhaqaalaha Bursa si ay ugu guuleystaan ​​kororka dhinacyada dhoofinta iyo shaqada. Waxaan dhisi doonaa aasaaska TEKNOSAB taasoo calaamad u ah kacaanka cusub ee warshadaha bilaha soo socda. Bursa, gaar ahaan maal-qaran iyo mid caalamiba sii wadi doonaan in ay qaataan TEKNOSAB ku lokomotiflig Turkey, "ayuu yidhi.
FADLAN KU SAABSAN DHAQAALAHA GUUD EE BURSA
madaxda sare ee shirkadaha, kuwaas oo ka qeyb galay kulanka oo ka wakiil ah Bursa iyo Turkey wadaago ay qiimeynta dhaqaalaha.
Pasi Makinen, Madaxweyne kuxigeenka Componenta, wuxuu yiri: d :nüy Waxaan u maleynayaa in shaqada ay qabatay BTSO iyo kulanka maanta inuu faa iido weyn u leeyahay shirkadaha caalamiga ah. ” maal-gashiga caalamiga ah ee Turkiga waxa ay muujiyaan in meel aad u soo jiidasho ah mishiinka, "Baahida iyo qaadashada talooyinka our on dhibcood horumarinta dheeraad ah oo xiriirka hadda jira waxaan u maleynayaa waa mid aad u muhiim ah, waxaan mahad BCCI ee kulankan," ayuu yiri.
BTSO BADBAADADA DHAQANKA
Agaasimaha TOFAŞ R&D Vincenzo Cusolito wuxuu cadeeyay in kulanku ahaa mid wax ku ool ah oo wuxuu yidhi, di Kulamada ay soo saareyaashu iskugu keenayaan waaxaha wax ku biirinaaya dhaqaalaha waa muhiim. BTSO waxay u shaqeysaa sidii buundada horumarka shirkadaha iyo dhaqaalaha magaalada. Waxaan raacnaa shaqooyinka Rugta waxaanan si joogto ah oo tayo sare leh ugu biirineynaa Bursa ”.
Maamulaha guud ee Bursagaz Markus Rapp ayaa muujiyay jacaylka uu u qabo Bursa wuxuuna yidhi, uz Waxaan aad ugu faraxsanahay horumarka ka socda Bursa. Waxaan ubaahanahay inaan kobcino magaaladeena si aan u kobcino ganacsigeenna. Macnaha guud, kulamada lagu qabtay hoggaanka BTSO waa muhiimad weyn. Iyadoo lagu tilmaamayo in ay muhiimadda ay leedahay fikrado ayaa isu yimid Rapp, "Farriimaha keentay sii wadi doonaan si ay u bixiyaan qiimaha weyn ku daray in ay Bursa iyo Turkey in line," ayuu yiri.
Kulanku wuxuu ku qabsoomay Dhismaha Adeegga Altıparmak ee BTSO, oo ay weheliso xubin ka tirsan Golaha BTSO Fahrettin Gülener, Rugta 'Bursa's ee Shirkadda Sare ee 250 Big Research, daraasaad sare oo caalami ah iyo Qunsuliyadaha sharafta leh ee Bursa.
Qiimaha Teleferik ee ku yaal Bursa
Rails Down to Altıparmak dhismaha Tramfire ee magaalada Bursa
Maalgashiyayaasha caalamiga ah